I-China i-Aluminium i-Countersunk Washer, i-Wasers yeFresersunk Fender, umxhasi wemibala ye-Wasrew Screw
Inkcazo:IAluminiyam yokuCoca i-Washer,IAluminiyam yeAluminiyam yokuBala yeasters,I-Countersunk Fender Washer,Umbala weScrew Umbala,,
Home > Imveliso > Izinto zokuhlamba ezihlaziyiweyo > IAluminiyam yokuCoca i-Washer
Iintlobo zeMveliso ze- IAluminiyam yokuCoca i-Washer , singabakhiqizi abakhethiweyo baseChina, IAluminiyam yokuCoca i-Washer , IAluminiyam yeAluminiyam yokuBala yeasters ababoneleli / umkhiqizo, iimveliso eziphezulu zexabiso eliphezulu ze-R & D kunye nokuvelisa, sinemisebenzi epheleleyo emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobuchwepheshe. Khangela phambili ekusebenzisaneni kwakho!
Ukuhlobisa i-OEM ye-Meta Alminum ye-washers
I-Washers ezimibalabala yeAluminiyam yokuBala ye-Aluminium
I-washer ehleliweyo ye-M3 Aluminium countersunk washer
Imibala ye-Anodised Billet aluminium Alloy Countersunk Washer
Ukuthengisa okuShushu iAnodized Aluminium yeCustomers Washer
IAluminiyam Washer yokubala ikhukhamba iNtloko yesikere iBolt Washer
IAluminiyam yeNdebe yeNqanawa yeAlloyum Washer
I-aluminium countersunk cone washer ye-cap head bolt
Umbala we-anodised aluminium alloy taper washer
I-Aluminium Button Head Washers ze-UAV
I-6061 yeAluminiyam eNtshisiweyo yeindebe zewashi
Imisonto emdaka yeewashs zemibalabala yeAluminiyam
Ukucwangciswa kweSitampu seAluminiyam yokuCwangcisa oSetyenzisiweyo eKhayeni
Iiluncedo Kumatshini iAluminiyam i-Countersunk Finishing Washers
Imibala yeQhosha leAluminiyamu elinombala ophethe i-Drone / Rc
Umbala weNdebe yeFlash yeAnodised enemibala engamabala
Ukuchaneka kweAluminiyam yokuCoca i-Washer Machine yesiqhelo eqhelekileyo
Umgangatho ophezulu wokhuphiswano ngexabiso leAluminium Washer Countersunk
Nikela ngokuthe ngqo kwi-CNC Colical Colors Anodised Aluminium Washer
Imibala ye-Anodizing Cup Aluminium Cup Washers vs Nuts
Ingcaciso yeMveliso I-Washers ezimibalabala yeAluminiyam yokuBala ye-Aluminium I-washers ze-Countersunk zisebenza ngendlela efanayo ne washer eflethi, kodwa zibonelela ngomhlaba othwele isikroba entloko. Izinto zokugqibezela ii-washers zibonelela...
Umbala we-Anodizing Aluminium wokubala i-Washer M3 M4 M5 Intshayelelo yeMveliso I-aluminium washer ngokubanzi ithathwa njengelunye uhlobo lwezixhobo zokuqina zealuminium. Xa i-gasket icinezelwe, kungcono ukusebenzisa i-torque wrench. Kwiibholithi...
Amandla okubonelela: 10000
Imibala ye-Anodised Billet aluminium Alloy Countersunk Washer I-washers ze-Countersunk zisebenza ngendlela efanayo ne washer ethe tyaba, kodwa zibonelela ngomhlaba othwele isikrweqe sentloko. Uhlobo lwe-ohter ye-wahser: I-Washer yeAluminiyam yeFlat,...
Ukuthengisa okuShushu iAnodized Aluminium yeCustomers Washer Izinto ezingafunekiyo ezenziwe nge-aluminium okanye i-aluminium alloy zibonelela ngezinto ezilula kwaye zinokunganyangeki ngakumbi kune-washer ekhanyayo yensimbi. I-washers ze-Countersunk...
IAluminiyam Washer yokubala ikhukhamba iNtloko yesikere iBolt Washer I-washers ze-Countersunk zisebenza ngendlela efanayo ne washer ethe tyaba, kodwa zibonelela ngomhlaba othwele isikrweqe sentloko. Izinto zokugqibezela ii-washers zibonelela...
Packaging: Iplastiki / iCarton
IAluminiyam yeNdebe yeNqanawa yeAlloyum Washer I-Countersunk Fender Washer (i-Counterbore Hole) luhlobo lwesantya se-aluminium, Yenziwe nge-aluminium ekumgangatho ophezulu kwaye yenza ukuba isantya sibethe xa kusasazwa umthwalo wesikere. Kukho...
Packaging: Iplastiki / uCarton
I-aluminium countersunk cone washer ye-cap head bolt I-Countersunk Fender Washer (i-Counterbore Hole) luhlobo lwesantya se-aluminium, Yenziwe nge-aluminium ekumgangatho ophezulu kwaye yenza ukuba isantya sibethe xa kusasazwa umthwalo wesikere. Kukho...
Umbala we-anodised aluminium alloy taper washer I-Countersunk Fender Washer (i-Counterbore Hole) luhlobo lwesantya se-aluminium, Yenziwe nge-aluminium ekumgangatho ophezulu kwaye yenza ukuba isantya sibethe xa kusasazwa umthwalo wesikere. Kukho...
I-Aluminium Button Head Washers ze-UAV I-Countersunk Fender Washer (i-Counterbore Hole) luhlobo lwesantya se-aluminium, Yenziwe nge-aluminium ekumgangatho ophezulu kwaye yenza ukuba isantya sibethe xa kusasazwa umthwalo wesikere. Kukho iintlobo...
I-6061 yeAluminiyam eNtshisiweyo yeindebe zewashi I-Countersunk Fender Washer (i-Counterbore Hole) luhlobo lwesantya se-aluminium, Yenziwe nge-aluminium ekumgangatho ophezulu kwaye yenza ukuba isantya sibethe xa kusasazwa umthwalo wesikere. Kukho...
Imisonto emdaka yeewashs zemibalabala yeAluminiyam I-Countersunk Fender Washer (i-Counterbore Hole) luhlobo lwesantya se-aluminium, Yenziwe nge-aluminium ekumgangatho ophezulu kwaye yenza ukuba isantya sibethe xa kusasazwa umthwalo wesikere. Kukho...
Ukucwangciswa kweSitampu seAluminiyam yokuCwangcisa oSetyenzisiweyo eKhayeni Intshayelelo yeMveliso I-aluminium washer ngokubanzi ithathwa njengelunye uhlobo lwezixhobo zokuqina zealuminium. Ukuba ukuvuza kombhobho kuya kufuneka kuthathe indawo emva...
Iiluncedo Kumatshini iAluminiyam i-Countersunk Finishing Washers Intshayelelo yeMveliso I-aluminium washer ngokubanzi ithathwa njengelunye uhlobo lwezixhobo zokuqina zealuminium. Kwiinqanawa zoxinzelelo kunye nemibhobho enokuvutha kunye neendaba...
Nikela ngokuthe ngqo kwi-CNC Colical Colors Anodised Aluminium Washer Intshayelelo yeMveliso I-aluminium washer ngokubanzi ithathwa njengelunye uhlobo lwezixhobo zokuqina zealuminium. Xa ufaka i-gasket, qinisa amantongomane ngokulandelelana. Nangona...
I-OEM kunye ne-ODM ephezulu yeAluminium yeKhawuntari yeCas Washer Intshayelelo yeMveliso I-aluminium washer ngokubanzi ithathwa njengelunye uhlobo lwezixhobo zokuqina zealuminium. Ukuqina kokuqinisa kwe-gasket akufuneki kudlule kwimilinganiselo...
Ukuchaneka kweAluminiyam yokuCoca i-Washer Machine yesiqhelo eqhelekileyo Intshayelelo yeMveliso I-aluminium washer ngokubanzi ithathwa njengelunye uhlobo lwezixhobo zokuqina zealuminium. Ububanzi obungaphandle be-gasket yokutywina kufuneka bube...
Umgangatho ophezulu wokhuphiswano ngexabiso leAluminium Washer Countersunk Intshayelelo yeMveliso I-aluminium washer ngokubanzi ithathwa njengelunye uhlobo lwezixhobo zokuqina zealuminium. Iirubber zerhasi zikwasetyenziswa kwiipompo (ii-valves)...
Nikela ngokuthe ngqo kwi-CNC Colical Colors Anodised Aluminium Washer Intshayelelo yeMveliso I-aluminium washer ngokubanzi ithathwa njengelunye uhlobo lwezixhobo zokuqina zealuminium. I-gasket ebunjiweyo ibhekisa kwi-gasket enxeba elisekweni...
UMvelisi we-Anodizing Cup Aluminium Cup Washers Intshayelelo yeMveliso I-aluminium washer ngokubanzi ithathwa njengelunye uhlobo lwezixhobo zokuqina zealuminium. 1) Isangqa ngaphakathi 2) Isangqa esingaphandle Isangqa esingaphandle sisikhonkwane...
KwiChina IAluminiyam yokuCoca i-Washer Abaxhasi
Ii-washers zethu zokubala ze-aluminium zingahle zenziwe ngendlela yokuba zilungelelane neenkcazo zakho kwaye zenziwe kuluhlu lwezinto ezibonakalayo, i-tempersunk, i-diameter kunye ne-thickness.Countersunk washers zilungele ama-screws amaqhosha kunye ne-socket cap screws.Zinokubonelela ngomhlaba ophathwayo ukunciphisa umphezulu wokugqoka kunye nembonakalo entle. Ukuba awuziboni ii-washers zealuminium ozifunayo kwikhathalogu yethu, sithumele iRFQ kunye ne-specs yakho. Sinokuvelisa ezi washer kwi-funa ukuzalisekisa iimfuno zakho ezizodwa kubandakanya imibala e-anodised.
IAluminiyam yokuCoca i-Washer IAluminiyam yeAluminiyam yokuBala yeasters I-Countersunk Fender Washer Umbala weScrew Umbala IAluminiyam yokutshixa i-Washer